ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သုံးကြမယ် ဖြုန်းကြမယ်”
That is how oil rich ME countries, China, Japan and Spore can have leverage onabig nation like US.
One has to be nice to the banker.
အနော်တို့ လဲ ချေးငှားပြီးတော့ကို သုံးဖြုန်း ချင်ပါတယ်။ မြန်မာထုံး နှလုံး မူပြီး နှစ်သစ် အတွက် ဆင် သက်စေ. ကုသိုလ် ပြုချင်လိုက် တာ။
share တဲ့ အတွက် ရော ၊ ဘာသာပြန် အတွက် ရော ကျေးဇူး ပါ ။ ကျွန်တော် တို့ လည်း ချေး ငှား တဲ့ အကျင့် လေး တွေ ၊ ဖြုန်းတီး တဲ့ အကျင့် လေး တွေ စတဲ့ အနေ နဲ့ ကို ပေါ ဆီ က ပဲ ငွေ စ ချေး မလား လို့ ။
အထက်ပါ လီယိုနာဒိုပေါ၏ သုံးကြမယ် ဖြုန်းကြမယ် ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး သကာလ အကျွန်ပ် မောင်ဘွိုင်ဇ်းမှာ အမိ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး စီးပွားရေးအရ ကမ်ဘာ့တစ်လွှား ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရေး အလို့ငှာ ကျည်းကန်ရှင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ မေတာစာကို မျက်ကွယ်ပြုလျက် ရှိသမျှ စုဆောင်းငွေ (ဒေါ်လာ ၂၀ နှင့် ၄၇ ဆင့်တိတိ)များ အပြင် နောင်အနာဂါတ် ကာလာတွင် ၀င်လာဖွယ်ရှိသည့် ၀င်ငွေများကို ဗုံးပေါလအော သုံးစွဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအပြင် လိုသလောက် သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် ရှိရှိသမျှ ဘဏ်တွင် ခရဒ်ဒစ်ကဒ်များ စတင် လျှောက်ထားနြေီ့ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်...။
အပေါ်က စတွေက နောက်နေတာ...။ အခုက အတည်ပြောတာ...။ အခုလို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဗဟုသုရဖွယ် စာကောင်းတွေကို ဘာသာပြန်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီးတော့လည်း ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ပြန်ပေးပါဦးလို့...။
ဗဟုသုတရပါတယ်ဗျာ.. ဂလိုဆိုတော့လည်း.. ဖြုန်းဖို့အားယူလိုက်အုံးမယ်.. ဟဲဟဲ...
ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲကစာကိုဖတ်မိတော့၊ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်၊ ကျနော်လည်းဒီရက်ပိုင်းမှ နားကြပ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဗျ၊ အို၊ တိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လွန်းတော့တယ်။
totally agree with you!!! Thinking of somebody to borrow money.... ha ha ha...
so saving is good or bad? u said ppl r feeling the pinch of cpf saving system in sg (kthwe blog)... can u talk abt it more?
ဆီပုံးမရှိတော့ ဘယ်နား ရေလာလောင်းရမှာလဲ ဂျ..
ရဘူး မဒမ်ပေါကိုပါ ဆွဲထုတ်ပြီး ဒီပို့စ်အောက်မှာပဲ ရေသေနတ်နဲ့ ပစ်သွားတယ် ဒက်ဒက်ဒက်ဒက်..